Inona ny surimi ary inona no nanaovana azy? | Bezzia
Emilio Garcia | 13/01/2022 15:03 | Nohavaozina amin'ny 14/01/2022 09:41 | lakozia, an-trano
Ny indostrian'ny sakafo dia miezaka hatrany manolotra sakafo izay manatsara ny sakafontsika amin'ny lafiny rehetra. Ny talantalana Supermarket dia manana vokatra vaovao manintona, ny sasany avy amin'ny latitude hafa. Ohatra, soja, quinoa na surimi Izy ireo dia mameno ny sakafo mediteraneana mahafinaritra antsika amin'ny fananana ara-pahasalamana. Ny fahafahana mahita an'ireo sy ireo sakafo hafa ary mampiditra azy ireo amin'ny fanaontsika dia mahatonga ny sakafontsika ho isan-karazany sy voalanjalanja amin'ny lafiny otrikaina. Ao anatin'ny hafanan'ny fatana dia misy fanontaniana mipoitra izay manana ny maha-ara-dalàna azy: Inona ary inona no nanaovana ny surimi?
1 Inona no surimi
2 Fananana Surimi
3 Surimi sy proteinina
Inona no surimi
Amin'ny ankapobeny, misokatra hatrany isika manandrana tsiro vaovao. Etsy ankilany, mbola vitsy ny mpanjifa tsy miraharaha ny tombontsoa azo avy amin’ny sakafo hohaniny. Noho ireo antony ireo, rehefa teraka ny vokatra vaovao ary mihamiharihary kokoa, Mipoitra matetika ny fanontaniana momba ny toetra maha-sakafo azy. Na dia teo anivontsika nandritra ny am-polony taona vitsivitsy aza, ny fanontaniana inona ny surimi mbola misokatra. Ho an'ny olona maro dia efa vokatra mahazatra izy io, hita amin'ny lovia toy ny antsika toy ny salpicón hazan-dranomasina na ny skewers mahandro sakafo Basque. Ho an'ny hafa, vokatra mbola misongadina noho ny zava-baovao izy io, mifanohitra amin'ireo akora mahazatra amin'ny sakafo Espaniola nentim-paharazana.
Toy ny amin'ny fromazy Manchego na ham Iberiana ao amin'ny kolontsaina gastronomika antsika, surimi dia vokatra nentim-paharazana any amin'ny faritra hafa amin'ny tontolontsika. Ny fiavian'ny razambeny dia miorina amin'ny fotoana, rehefa nipoitra ho toy ny fomba fitehirizana trondro. Araka ny asehon'ny toetra tsaran'ny anarany, dia tany Japon ny niaviany, tokony ho arivo taona lasa izay ary ny dikan'ny teny hoe "fillet trondro voatoto”. Noho izany antony izany, manontany tena hoe inona ny surimi ao amin'ny tanin'ny masoandro miposaka dia tsy misy dikany, toy ny ataontsika amin'ny saosisy na lasopy legioma miaraka amin'ny saosisy. Ny zava-misy dia ny surimi dia misy amin'ny sakafo Japoney fototra isan'andro toy ny udon na sushi.
Mba hanazavana tanteraka ny fanontaniana momba ny atao hoe surimi, dia mbola mila jerena ny lafin-javatra manan-danja. Hatramin'ny namoronana ny surimi tamin'ny taonjato faha-XNUMX, dia mazava fa ny sakafo, ny fomba ary ny teknolojia dia nivoatra be. Indrindra fa tamin'ny taonjato farany, ny famokarana mpanao asa tanana dia nanome lalana ho amin'ny famelabelarana be pitsiny kokoa sy miaraka amin'ny antoka ara-pahasalamana rehetra. Na izany aza, ny teknika fanaovana surimi dia tsy miova efa ho 10 taona taty aoriana. Mba hahazoana surimi kalitao dia ilaina ny mampiasa trondro tena vaovao ary avy aminy, mifidiana ny tsara indrindra: ny steaks. Ny iray amin'ireo karazana tsara indrindra amin'izany dia ny Alaska pollock, izay avy amin'izany rehefa madio ny andilany dia tetehina mba hahazoana proteinina. Tena mahaliana ny mahafantatra ireo lafiny ireo rehefa mamaly ny atao hoe surimi. Amin'ny fanararaotana trondro vaovao andilany, surimi dia a safidy tsara amin'ity sakafo ity, toa azy, isao ny tombontsoanao.
Tsy nisy na inona na inona niova, noho izany, amin'ity sakafo ity. “Saika” no lazainay satria ny fepetra nanaovana azy no nanao izany. Amin'io lafiny io, surimi toy ny an'ny
Ny Krissia® dia vita amin'ny fotoana rehetra amin'ny mari-pana ambany mba hahazoana ny kalitao avo indrindra sy ny havaozina amin'ny proteinina. Na izany aza, ilaina foana ny mamaky ny fampahalalana momba ny sakafo alohan'ny hividianana vokatra. Amin'izany fomba izany, ny Krissia® surimi bar tsy misy preservatives na loko artifisialy noho izany dia misafidy ny pasteurization izy ireo ho antoky ny fiarovana ny sakafo. Ity fomba ity dia hita amin'ny sakafo fototra toy ny ronono sy yaourt ary mamela anao hanana ny surimi foana ao amin'ny vata fampangatsiahana.
Surimi sy proteinina
Namboarina tamin'ny ampahany tsara indrindra amin'ny trondro, ny surimi dia manana proteinina be dia be ahitana ny asidra amino tena ilaina rehetra ary misongadina ho azy ireo mora assimilation sy fandevonan-kanina.
Ny habetsahan'ny trondro natolotry ny manam-pahaizana momba ny sakafo dia eo anelanelan'ny 3 sy 4 isan-kerinandro. Raha tsy mahasolo mivantana an'io fa safidy ara-pahasalamana ho an'io, mihinana surimi manampy hampitombo ny habetsahan`ny proteinina isan`andro ary manana tombony hafa mitovy amin'izany izy io. ny surimi bars ahitana koa omega 3, asidra matavy polyunsaturated sasany tena ilaina amin'ny fahasalaman'ny fo sy ny fo vitamin B12, tsy misy afa-tsy amin'ny sakafo avy amin'ny biby, ary manampy amin'ny fampihenana ny harerahana sy ny havizanana izany. Ny singa hafa misy ao amin'ny surimi bars dia ny mineraly toy ny selenium, manan-danja amin'ny fampandehanana tsara ny rafi-keryntsika.
Noho izany, raha tia misakafo tsara ianao ary miahiahy momba ny sakafonao, ny surimi dia mpiara-miombon'antoka lehibe hamenoana sy hanatsara ny sakafonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Inona ny surimi ary inona no nanaovana azy?